‘चिल्ला सडक किनारमा मगन्ते देखिनुहुन्न’ - Nice Samachar
‘चिल्ला सडक किनारमा मगन्ते देखिनुहुन्न’
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १९:५१ 577 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । कुनै पनि महामारी वा विषम स्थितिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग नै हुने गर्छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तको मुहारमा उज्यालो नदेखिएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्दैन । यस यथार्थलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुभएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ समाजको पीँधमा रहेका वर्गको हित र विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक विमर्शसहित नीतिगत रुपान्तरण गर्ने काममा अनवरत लागेका छन् ।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकभरिबाटै सबभन्दा बढी मतान्तरसहित दोलखाबाट निर्वाचित गुरुङका लागि पहिलो पटक आफ्नो कार्यादेश भएको क्षेत्रमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै उपलब्ध छन् । मन्त्री गुरुङसँग सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा सोमबार प्रकाश सिलवाल र कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :
मन्त्रीको पदमा रहिरहँदा गाउँ र कुनाकाप्चाका हेपिएका ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाका उत्पीडन र दुःखको चित्र अगाडि आउँदो हो ! तिनले तपाईंलाई कसरी सम्झलान् जस्तो लाग्छ?
लकडाउनमा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र हिंसामा परेका महिलालाई पनि उद्धार गर्नुभएको छ, यो काम कसरी भइरहेको छ ?
अहिले पनि नेपालमा छाउगोठ छन् र त्यसका कारण हामी कलङ्कित भएका छौंँ । यस्तो प्राकृतिक विषयलाई पनि हामीले कलङ्कमा पु¥याएका छौंँ । त्यसो गर्नुभएन, मर्यादित महिनावारीको संस्कार बसाल्नुपर्छ । मानव बेचबिखनमुक्त, हिंसारहित नेपाल बनाउनुपर्छ । समय परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गराँै । बालबालिकामा राष्ट्र, बाबुआमा र देशप्रेमको भावना जगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो, ‘पुर्खाले लडेर देश बचाए, हामीले अडान लिएर बचाउनुपर्छ’ । यसरी जगाउने हो राष्ट्रिय भावना । राज्यको सयौँ रोपनी सम्पत्ति अहिले पनि व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो हानिकारक अभ्यासलाई अन्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी आफैँ लाग्नुपर्छ ।
यो राष्ट्रिय गौरवकोे योजना भनेर नै नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएका छौंँ । हामी यससम्बन्धी अध्ययन गर्छाैँ । विदेशमा रहेका यस्ता अभ्यास पनि हामी हेर्छौँ । कानून बनाएर स्थानीय तहमा सहजीकरण गरी यसको नमूना पनि दिन्छौँ । त्यहाँको स्रोत र साधन हेरेर हामी त्यो काम गर्नेछाँै । रोजगारीको अवसरको सिर्जना पनि गर्नेछौँ ।
विश्वविद्यालयको ज्ञान र दक्षतालाई लिएर संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी प्रयास गर्नेछाँै । मूल विषयका रूपमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी रहनुपर्छ । हाम्रा कतिपय विज्ञसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । हामीलाई नयाँनयाँ अभ्यास चाहिएको छ ।
कोरोनासँग सम्बन्धित तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनु जरुरी छ भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छाँै । क्वारेन्टिनमा रहँदा के गर्ने ? घर गएपछि के गर्ने ? दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने भनेर रणनीति बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।
दुर्गम जिल्लामा अस्पताल नभएको, उचित सडकको व्यवस्था नभएको अवस्थामा हामीले विपन्न परिवारका लागिे आपत्कालीन उद्धार गर्ने गरेका छौ । महामारीमा १७ र जम्मा १०७ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भएको छ । दुर्गमबाट हेलिकप्टर आउने भएपछि अवस्था कमजोर नै देखिन्छ । त्यस्ता महिलालाई पोषणयुक्त खानाका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हेरिरहेका छौ । रासस
अन्तर्वार्ताः अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ
‘मानव सभ्यताको चिनारी हो
आदिबासी जनजातिहरुले पहिचान सहितको
एशियाकी पहिलो महिला टेम्पो
भर्सटायल गायीका श्रीस बिदेशको
‘‘डा. केसीका कारण शिक्षा
‘हामीलाई खाना, नाना र
”छरिँदा भन्दा एक हुँदा
सरकारको आलोचना गर्न अहिले